Vaovao - Glass vera, ny tombony ary ny fatiantoka, hainao daholo?
Glass ao an-trano
Glass azo antoka
Ny fitaratra antonony dia karazana fitaratra azo antoka. Raha ny marina, io koa dia karazana vera nopotserina. Mba hampitomboana ny tanjaky ny vera, dia matetika ny fomba simika na ara-batana no ampiasaina hananganana tsindrin-tsindrona eo ambonin'ny fitaratra. Rehefa iharan'ny herin'ny hery ivelany ny vera, dia ny offset no jerena voalohany, amin'izay hanatsarana ny fahaizany mitondra ary hanatsara ny fanoherana ny rivotra ilay fitaratra. Firaisana ara-nofo, hatsiaka ary mafana, taitra sns.
Ny vera malemy dia fomba iray anafanana ny vera mitsinkafona avo lenta manakaiky ny teboka malemilemy, ary mihamangatsiaka haingana ny tampon'ny vera, ka zahana eo amin'ny tampon'ny vera ny fihenan-tsoroka, ary ny fihenjanana am-pahefana dia eo amin'ny sosona afovoany. Noho ny tsindry mafy mampitovy mampitovy, ny fihenjanana am-pahefana ateraky ny tsindry ivelany dia voan'ny fihenjanana mafy amin'ny fitaratra, ka mampitombo ny fiarovana ny vera.
Ireto misy toetra mampiavaka an'ity fitaratra ity:
1. Tanjaka: ny tanjaky ny mekanika, ny fanoherana ny fiatraikany ary ny tanjaky ny vera aorian'ny fametahana azy dia mety hahatratra 4-5 heny noho ny vera mahazatra.
2. nohatsaraina ny mari-pana ara-pahasalamana: mahazaka fahasamihafana lehibe eo amin'ny mari-pana tsy misy simba ny fitaratra mahamay, ary ny fanoherana ny tsy fitovian'ny maripana miovaova dia intelo heny noho ny vera mitsingevana mahazatra mitovy hateviny. Afaka mahatohitra ny fiovan'ny hafanan'ny 150 C, misy fiatraikany lehibe amin'ny fisorohana ny famakiana mafana.
3. Fanatsarana azo antoka: Rehefa simba ilay vera nopotsehina, dia hampiseho vetivety ny poti-zoro bitika, ka hampitombo ny fiarovana azy manokana. Fampiharana: Indostrian'ny fanaka, elektronika ary elektrika, fananganana, indostrialy haingon-trano, efitrano fandroana, fiara, escalator, ary toerana hafa ilana fahasamihafana amin'ny fiarovana sy ny mari-pana, ary azo ampiasaina ho horonantsary voalohany an'ny vera fitaratra sy vera vita amin'ny vera.
Fampiasana: an'ny vera azo antoka ny vy vy sy ny vera voaendy. Ampiasaina be amin'ny varavarana sy varavarankely avoavo, rindrina ambainy fitaratra, fitaratra fizarazaran-trano, valin-drihana fanaingoana, fidirana amin'ny ascenseur fitsangatsanganana, fanaka, fantsom-baravarana fitaratra sns.
Ny lesoka sy ny lesoka amin'ny vera maotera:
1. Rehefa tsy azo hokapaina sy tsy ho voahodina intsony ilay vera nopotsehina, vao azo alamina araka ny habe sy ny bika ilaina ny vera alohan'ny hamonoana azy, ary avy eo arotsaka.
2. Na dia matanjaka noho ny vera tsotra aza ny tanjaky ny vera maotera, ny fitaratra mihoatrana dia mety manana fanalefahana tena (vaky tena) rehefa miova be ny fahasamihafana eo amin'ny maripana, ary ny vera iraisana dia tsy manana fipoahana-tena.
Aorian'ny fikolokoloana ny fitaratra, ny tanjaky ny mekanika amin'ny tampon'ny vera dia 3 ka hatramin'ny 5 heny noho ny an'ny vera tsotra, fa ny zoron'ny vera mora tezitra kosa ary mety ho vaky rehefa iharan'ny herin'ny hery ivelany. Ho fanampin'izay, raha miova matetika ny maripana ivelany dia mety hipoaka-tena ihany koa ny vera feno fahatezerana.
Ny amboadia taloha am-baravarana sy ny varavarankely dia mampahatsiahy ny rehetra fa rehefa mampiasa vokatra fitaratra maotina ianao dia mitandrema mba tsy hianjera amin'ny zoro. Soso-kevitra ny tsy hanovana ny maripana fitaratra amin'ny fiovana matevina ao anatin'ny fotoana fohy hisorohana ny fipoahan'ny tena. Ankoatr'izay, ny tapany afovoan'ny vera voahenjana no matanjaka indrindra, ary ny zoro efatra sy ny sisiny no malemy indrindra.
Raha misy vonjy maika, ny vera voahodina dia azo vaky ary afa-mandositra. Ny fomba tsara indrindra dia ny mamely ny sisiny sy ny zoron'ny vera amin'ny tantanana fiarovana na vongan-tany maranitra hafa, indrindra eo afovoan'ny sisin'ny tampon'ny vera. Raha vaky ny vera dia mora ny manorotoro ny vera manontolo.
Fotoana fandefasana: Mar-18-2020